စောင့်, ဘာ? ဟုတ်ကဲ့, အဲဒါအမှန်ပါပဲ! "ဟုခေါ်တစ်ခုခုရှိနေသော်ငြားလည်းဥရောပ၌နေ့ချင်းညချင်းရထားကျော်ဖြုန်းသော "ခရီးသွားများအတွက် 10 ရထားပေါ်မှရထားတစ်နာရီမှ B သို့ရထား B သည်နာရီပိုင်းဥရောပရထားဖြင့်စီးနင်းခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနိုင်သည် ပိုက်ဆံချွေတာ ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းအပေါ်. နေ့ချင်းညချင်းရထား "အတွင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နေရာထိုင်ခင်းအမျိုးအစားပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါတယ်," လူတိုင်းရဲ့နယ်လှည့်ဦးစားပေး fit မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့်၎င်းတို့၏ဘတ်ဂျက်. ဒါကြောင့်, ကျနော်တို့ရရှိပါသည်:
သငျသညျရထားသွားလာဖြစ်စေမအကြောင်းကိုဒုတိယအတှေးအရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းနောက်တစ်ကြိမ် - ငါတို့သည်အဖြေကိုတော်တော်လေးရှင်းပါတယ်ထင် ... မ? ကိုသွားပါ Save-A-ရထား ၌သင်တို့၏ဦးတည်ရာစာအုပ်ဆိုင်3မိနစ်များ, ဈေးအပေါဆုံးနှုန်းမှာ, နှင့် obnoxious ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစိတ်သက်သာရာရ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-surprising-facts-you-should-know-about-trains-in-europe-fun-times%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)